कालोबजारीमा लिप्त आयल निगमका अधिकारीलाई झपार्यो अख्तियारले, इन्धन सहज नभए कारबाही गर्ने चेतावनी
काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज नभएको खण्डमा नेपाल आयल निगमका उच्च पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने चेतावनी दिएको छ । आयोगले आज निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र निर्देशक मुकुन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई बोलाएर इन्धन वितरण पारदर्शी नभएको, उपभोक्ता लाइनमा बस्नु परेको र अझै पनि...
भ्रष्ट कर्मचारीका श्रीमतीहरु पनि अख्तियारको फन्दामा !
काठमाण्डौ । नेपालमा धेरै कर्मचारीहरु श्रीमतीको दबाबमा सामाजिक रवाफ देखाउन पैसा कमाउन खोज्दा भ्रष्टाचारको दल दलमा फस्ने गरेका छन् । श्रीमानलाई भ्रष्टाचार गर्न उकास्ने सरकारी कर्मचारीका त्यस्ता श्रीमतीहरु समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्न थालेका छन् । अख्तियारले पछिल्लो अकुत सम्पती कमाउने नेता तथा...
मञ्जुश्री फाइनान्समा १२ करोड घोटाला, सिईओ फरार
काठमाण्डौ । धितो बिना नै कर्जा प्रवाह गरी मञ्जुश्री फाइनान्समा करिब १२ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छ । फाइनान्सका पूर्व सिईओ नवराज थापाको मिलेमतोमा ठुलो रकम कर्जाका नाममा हिनामिना भएको हो । प्रहरीले फाइनान्सका एक ऋणिलाई पक्राउ गरेको छन् भने पूर्व सिईओ थापा फरार भएका छन् । उक्त फाइनान्सबाट अनियमित तरिकाले कर्जा लिने रामशरण भण्डारीलाई...
पूर्वी नेपालमा बिना दर्ताका सिटी सफारी छ्यासछ्यास्ती, ३२ करोडको भाग कस-कसलाई पुग्यो ?
इटहरी । आधुनिक युगमा सर्वसाधारणको यात्रामा समेत आधुनिकीकरण हुनु विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले राम्रो पक्ष हो । यही उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यात्रुहरुको सुविधाका लागि आधुनिक विधिले तयार गरिएका सवारी साधन भित्रिनु पनि राम्रै कुरा हो । तर ती सवारी साधन दौडने सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा नियमनकारी निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ...